Health Archives - MinSayYar
ကျောက် ကပ် ပျက် စီး သွား ရင် ဘာ ဆေး နဲ့ မှ ကု မ ရ တော့ ပါ ၊ နောက် ဆုံး ကျောက် ကပ် ပျက် စီး သွား လို့ ကျောက် ကပ် အ စား ထိုး ပြီး ကု သ ပေ မယ့် သန့် ရှင်း ရေး / ဆေး ဝါး နဲ့ ကျန်း မာ ရေး တို့ ကို သေ ချာ ဂ ရု မ စိုက် မိ တဲ့အခါ အ […]
6th January 2021 Editor
Zawgyi ယခုပုံမှာ မြင်နေရတဲ့ အပင်ကတော့ တိမ်ဂမုန်းပင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဒေသမှာတော့ ဂမုန်းတိမ်ပြာလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ မျက်စိရောဂါများအတွက် အလွန်ဆေးဖက်ဝင်သည့် အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တောရဆောက်တည်နေသော ဆရာတော်တစ်ပါး၏ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းခဲ့သော ဆေးနည်းတစ်မျိုးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ထိုတိမ်ဂမုန်းဖြင့် တိမ်စွဲနေသော မျက်စိကို ကုသ၍ ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ (၁) တိမ်ဂမုန်းပင်၏ ဥကိုတူယူ၍ နေရိပ်တွင် အခြောက်လှန်းပါ။ (၂) ထိုဥကို အမှုန့်ကြိတ်၍ ပျားရည်နှင့် မန်ကျည်းစေ့ခန့် လုံးထားကာ ညစဉ် တစ်လုံးစီ သောက်ပါ။ (၃) ထိုအမှုန့်ကို မကြာခဏ ရှူပေးပါ။ (၄) ထိုအမှုန့်ကို အဝတ်သန့်သန့်တွင် ထည့်၍ မျက်စိပေါ်ကို (၁၀) မိနစ်ခန့် အုပ်ထားပေးပါ။ (၅) တိမ်ဂမုန်း၏ ဥကို ပြုတ်၍ ၎င်းပြုတ်ရည်ဖြင့် […]
12th December 2020 Editor
ခဏခဏတိုးနေတဲ့ သွေးတိုးနေတာ ဒီနည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေခဲ့လို့ပါ ခဏခဏတိုးနေတဲ့ သွေးတိုးရောဂါကို ယခုနည်းနှင့် အဆင်ပြေခဲ့လို့ မျှဝေပါသည်။ သွေးပေါင်ချိန်180/100လောက်ပုံမှန်ရှိနေတတ်တဲ့ လူနာရှင်တယောက်အံဘြဖွယ်120/80mmHg လောက်သွေးတိုးကျဆေး မသောက်ပဲပုံမှန်ဖြစ်သွားတာ တွေ့ရတဲ့တိုင်းရင်းဆေးနည်းကောင်းလေးပါခင်ဗျာ။ Onlineပေါ်ကတွေ့တာကို အကုန်အကျ မများ ကိုယ်အနီးအနားမှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမို့လက်တွေ့လုပ်ကာစမ်းသောက်ကြည့်လိုက်တာပါ။ အတော်ထူးခြားစွာဆေးအမြဲထိုး စားနေရတဲ့ဘဝကလွတ်သွားသူ လူနာတယောက်ရဲ့ကိုယ်တွေ့နည်းလမ်းကောင်းလေးမို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေများလဲအသုံးပြု့လိုကပြု့နိုင်အောင်ဇိဝိတဒါန ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မနေညနေကတင်ထားပြီးသား အားမရသေးလို့ လက်တွေ့ဖော်စပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်။ သွေးတိုးဆိုတာသွေးအေး လူသတ်သမားပါဖွံ့ဖြိုးမှု့နိမ့်ကြတဲ့တိုင်းပြည်တွေအစားအသောက်ဆေးဝါးအသီးအနှံ့တွေနေထိုင်မှု့စနစ်တွေအကာအကွယ်မဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မထိမ်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့တိုင်းပြည်မှာ လူ၁၀၀မှာအနည်း ၅၀ကျော်အထက် ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါပါ။ ဝင်တွင်းရောဂါ ကလီစာတွေချို့ယွင်းမှု့အလိုက်တယောက်နဲ့တယောက်သွေးတိုးရတဲ့အကြောင်းအရင်းအနေအထားမတူညီနိုင်တော့ ကျိန်သေလူတိုင်းပျောက်မယ်လိုတော့ မဆိုလိုပါ။ ပျောက်သူတကယ်ရှိတကယ်တွေ့တဲ့လက်တွေ့နည်းလေးမို့ပါယုံကြည်ပါက ဖော်စပ်အသုံးပြု့နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကျန်မာချမ်းသားကြပါစေ။ ပါဝင်ဖော်စပ်ပုံ ၁ ။ဒန်သလွန်အမြစ် အခေါက်၂ဆခန့် ၊ ၂ ။ဆင်တုန်မနွယ်ပင် ၁ဆကျော် ၊ ၃ ။ထန်းလျှက် ချွတ်ဆေးမပါသဘာဝအတိုင်းဆိုပိုကောင်း ၁၀သား ၄ ။ ဆန်ဆေးရည်အသန့်သင့်တင်စွာရေသန့်ဗူးသိုးမဟုတ် သင့်တင့်ရာလေလုံးမဲ့ဗူးထဲရောစပ်ကာ […]
ဘဲဥ မစားသုံးသင့်သောရောဂါများ အစားလည်းဆေး၊ဆေးလည်းအစာ စောမျိုးမြင့်(တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီ) ဘဲဥ မစားသုံးသင့်သောရောဂါများ ဘဲဥ ကို သရက်ရွက်မလုံလောက်၍အေးပြီးဝမ်းလျှော့ဝမ်းပျက်သူများမစားသုံးသင့်ပါ။ အစာစားပြီးနောက်ဂတ်စ်ဓာတ်ငွေ့ရပ်တန့်ပြီးဝမ်းဗိုက်ချိုတဲ့သောသူများ မစားသုံးသင့်ပါ။ အရေးပြားရောဂါရှိသူများ၊ယားယံနာရှိသူများမစားသုံးသင့်ပါ။ ရှေးခေတ်တိုင်းရင်းသမားတော်များက အဆီများ၍ရောဂါကိုပိုမိုဆိုးစေသောကြောင့် ကင်ဆာ၊လင့်အကျိတ်ရောင်နာ၊တီဘီရောဂါရှိသုများ၊ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာရှိသူများ၊အရေးပြားအနီအကွက်အကွက်ထသောရောဂါရှိသုများ၊ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါရှိသူများ မစားသုံးသင့်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းသော သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုများကိုအသုံးပြု၍ သင်၏ ရောဂါဝေဒနာများ သက်သာပျောက်ကင်းလိုလျင် စောမျိုးမြင့်(တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီ) B.A.(Psy.). D.B.S.,C. T. Med(yangon) မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဆရာအသင်းဝင် တရုတ်တိုင်းရင်းသမားတော်အဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းဝင် အမှတ်(67)ပထမထပ်,A2,မှန်ခန်း၊ပြည်တော်အေးလမ်း၊လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ Pho-09 5052028,09 785052028, 09 965052028.09695052028, (ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်အကျော် စံပြစျေးAYAဘဏ်နောက်ကျောအနီး) ဘဲဥ မစားသုံးသင့်သောရောဂါများ အစားလည်းဆေး၊ဆေးလည်းအစာ စောမျိုးမြင့်(တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီ) ဘဲဥ မစားသုံးသင့်သောရောဂါများ ဘဲဥ ကို သရက်ရွက်မလုံလောက်၍အေးပြီးဝမ်းလျှော့ဝမ်းပျက်သူများမစားသုံးသင့်ပါ။ အစာစားပြီးနောက်ဂတ်စ်ဓာတ်ငွေ့ရပ်တန့်ပြီးဝမ်းဗိုက်ချိုတဲ့သောသူများ မစားသုံးသင့်ပါ။ အရေးပြားရောဂါရှိသူများ၊ယားယံနာရှိသူများမစားသုံးသင့်ပါ။ ရှေးခေတ်တိုင်းရင်းသမားတော်များက အဆီများ၍ရောဂါကိုပိုမိုဆိုးစေသောကြောင့် ကင်ဆာ၊လင့်အကျိတ်ရောင်နာ၊တီဘီရောဂါရှိသုများ၊ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာရှိသူများ၊အရေးပြားအနီအကွက်အကွက်ထသောရောဂါရှိသုများ၊ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါရှိသူများ မစားသုံးသင့်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းသော သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုများကိုအသုံးပြု၍ […]
နာနတ်ရွက် တစ်ရွက်က ဒီလောက်ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်း ခုမှသိတော့တယ်….မိတ်ဆွေတို့လည်း ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်
နာနတ်ရွက် တစ်ရွက်က ဒီလောက်ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်း ခုမှသိတော့တယ်….မိတ်ဆွေတို့လည်း ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် နာနတ်ပင်ဟာဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ နာနတ်သီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုနေကြတဲ့ သတင်းများ လည်းရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင်တဲ့ နာနတ်သီးကနာနတ်ရွက်လေးတစ်ရွက်နဲ့တင် လူအများ အတွက် ဆေးအသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါ တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုသူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်- (၁) နာနတ်ရွက်(၁)ရွက်ကို ထုထောင်းပြီးညှစ်ရည်(သတ္တုရည်) ဟင်းခပ်ဇွန်း(၁)ဇွန်းကို သကြားထည့်ပြီး သောက်ပေးပါက ကြို့ထိုးခြင်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၂) ဒါတင်မကပါဘူး။ အမျိုးသမီးများ မီးယပ် သွေးချုပ်ခြင်း၊မီးယပ်ငုတ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးကာ မီးယပ်သွေးကိုမှန်ကန်စေပါတယ်။ (၃) ကလေးတွေအတွက် အရွက်ညှစ်ရည်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၂)ဇွန်းလောက်တိုက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းကသန်ကောင်တွေကို သေစေပါတယ်။ (၄) အလှအပကျန်းမာရေးအတွက် လူအတော်များများ စိတ်ညစ်ကြရတဲ့ ဥိးခေါင်းကသန်း၊ဗောက်၊အနာအဆာ များ ကို ခေါင်းလျော်ရည်ထဲနာနတ်ရွက်ထုချေရောစပ်ပြီး လျှော်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြီးလည်း လျှော်ဖူးပါတယ်။ […]
“ဆံပင်ဖြူတွေ” ကို တစ်ခါပြန်နက်စေမယ့် ကြောင်လျှာသီး အစွမ်း
Zawgyi] “ဆံပင်ဖြူတွေ” ကို တစ်ခါပြန်နက်စေမယ့် ကြောင်လျှာသီး အစွမ်း ဆံပင်ဖြူကိုဆိုးဆေးမသုံးပဲပြန်မနက်နိုင်ဟုထင်ကြသည်။ကြောင်လျှာသီးကို ပေါ်သောရာသီတွင်နှစ်လခန့် နေ့စဉ်ပြုပ်၍အတို့အမြှုပ်လုပ်၍၎င်း။ကြော်ချက်အဖြစ် ၎င်း။မီးဖုတ်ပြီးကြက်ဥနှင့်ရောကြော်၍၎င်းတစ်နည်း နည်းဖြင့် နေ့စဉ်စားသုံးပေးလျှင်ဆံပင်ဖြူများပြန်နက်လာစေနိုင်သည်။ ကြောင်လျှာပွင့်ခြောက်များကိုပေါသောရာသီတွင် ဝယ်ယူစုဆောင်းပြီးစဉ့်အိုးငယ်တွင်သိပ်၍ တစ်နှစ်လုံးသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် ။အပွင့်ကိုရေနွေးဖျော၍သုပ်စားလျှင်လေဆက်စေသည်ဟုရှေးလူကြီးများပြောသည်။လေအားကောင်းစေသည်။ နားလေထွက်ခြင်း။နားပင်းခြင်း။အသက်ကြီး၍နားလေးခြင်းများအတွက်ကောင်းပါသည်။ (သွေးတိုးရှိသူများကတော့ သတိထားစား၊သွေးကျဆေးသောက်ပါ) ဆေးကျမ်းများမှ(အဆို) ၁။ ကြောင်လျှာသီးကိုကြက်သားနှင့်ချက်စားပါကပန်း နာ(ရင်ကြပ်)ရောဂါပျောက်သည်။ ၂။ ငါးရံ့ဖြင့်ချက်စားပါက ကာလဝမ်းရောဂါပျောက်ဧ။် အားကိုဖြစ်စေပြီးအစာမကြေဝမ်းပျက်ပျောက်ဧ။်။ ၃။ ပုဇွန်ဖြင့်ချက်စားပါကနှလုံးလေရိုက်ရောဂါ။ နှလုံး တုန်ရင်တုန်ရောဂါပျောက်ဧ။်။ ၄။ ငါးသလောက်ဖြင့်ချက်စားပါကအဖောရောဂါကျစေ ၍နှလုံးရောဂါကိုသက်သာစေသည်။ ၅။ ငါးမြွေတိုးနှင့်ချက်စားကဒူလာသွေးဝမ်း။မီးယပ်သွေးဝမ်း။မြင်းသရိုက်(လိပ်ခေါင်း) ရောဂါတို့ပျောက်ကင်းစေနိင်ပါသည်။ သွေးတိုးနှင့်တည့်မတည့်မေးသူများအတွက် ၁။အပူသွေးတိုး နှင့် ၂။အအေးသွေးတိုး ဟုနှစ်မျိုးရှိသည်။ အလွယ်ပြောရလျှင် လူပိန်၊မဲများသည် အပူသွေးတိုးရှိတတ်သည်။ သွက်လက်သည်။ဒေါသကြီးသည်..လူဖြူ၊ဝ၊စို၊အသားအရေအေးသူများ၊ဇိမ်ခံသူများတွင် အအေးသွေးတိုးရှိတတ်သည်။ အအေးသွေးတိုးသည် ဆီးချိုနှင့်တွဲဖြစ်တတ်သည်။ သွေးတိုးသည်. လေတိုးဟုလည်းယူဆသဖြင့်. (အခါးဟူသမျှ၊လေဓာတ်ကြွ) အယူအဆအရ .. အခါးအရသာရှိသောအစာမှန်သမျှသွေးတိုးနိုင်သည်။ကြောင်လျှာသီးသည်ပူခါး […]
မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်း ဖြစ်ဖြစ်အသက် ၄၀ ကျော်သူများအတွက် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီအားဖြည့်ဆေး
အသက် ၄၀ ကျော် လာတာနဲ့ယောင်္ကျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာ တတ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်သည်တွေ ပိုဆိုး ပါတယ်..။ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာရင် အရွယ်ရင့်မြန်လာခြင်း မလှုပ်ချင် မကိုင်ချင် မကြာခဏ ဖြစ်ခြင်း ယောင်္ကျား ဆိုလျှင် ဒူလာဖြစ်ခြင်း ပြင်ပ ရောဂါ ဝင်လွယ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..။ ယခု တင်ပြ မှာက မြန်မာ့ တိုင်းရင်းနည်း ဖြင့် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ အားကောင်း နည်းလေးပါ..။ ဆေးနည်း ဖီးကြမ်း ဌက်ပျောသီးကို မီးဖုတ်ပါ ။ … ပြီးလျှင် ခွက် တစ်ခုထဲ ထည့်ပါ..။ နှမ်းဆီ စစ်စစ် ထည့်ပါ ။ သမအောင် […]
ဆီးချိုသမားများအတွက်် ကညွတ်် မွ ပေးသော ကျန််းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
ကညွတ်ဟာ ဆီးချိုရောဂါ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် လက်န က်ဟုဆို ကညွတ်ကို ပုံမှန်စားသုံးတဲ့ သူတွေ ဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ် ပုံမှန်ဖြစ် အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ဂလူးကို့စ် ကို စုပ် ယူဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်မှုလည်း မြင့်တက်လာ နိုင်တယ် လို့ သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေ က တွေ့ရှိခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ကညွတ်ဟာ ဆီးချိုရော ဂါကို တွန်းလှန်ဖို့ နောက်ဆုံးပေါ်လက် နက်ဖြစ်လာမယ်လို့ သိပ္ပံပညာ ရှင် တွေက ယုံကြည်ကြ ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ ပေါင်း တစ်သန်းကျော်ဟာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နေမှန်း မသိရှိကြသူ တွေဖြစ်ပါ တယ်။ မောပန်း တာ၊ ရေငတ်တာ၊ မကြာခဏ […]
မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် ပိုက္ဆံ မကုန်ပဲ လှနေစေမည့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ
မိန်းခလေးတေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလေးတေ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်အဆုံးထိ ဖတ်ကျိသွား ပိုက်ဆံ မကုန်စေပဲ အလှအပရေးရာ အစုံပလုံံ 1.မနက်ဖြန် ခေါင်းလျှော်မယ်ဆို ဒီနေ့ညဘက်မှာ အုန်းဆီများများလူးအိပ်ပါ ( Sheryl က သံလွင်ဆီ ပိုကြိုက်တယ်)မနက်ကြ ခေါင်းလျှော်ချပါ ဆံပင်ပျော့ပြောင်းပြီးသန်လာစေပါတယ် 2.ဆံပင် အရှည် မြန်ချင်ရင် အောက်ဖျားလေးတွေ ညှိပေးပါ 3.မကောင်းတဲ့ဆံပင်တွေ တိချင်တယ်ဆိုရင် ဆံပင်အကုန်လုံးကို ပုခုံးတစ်ဖက်ထဲဘက်ကို သိမ်းယူပါ ပြီးရင် ဆံပင်ကို ၂ပတ် ၃ပတ်လိမ်လိုက်ပါ လိမ်လိုက်ရင် ထိုးထိုးထောင်ထောင် ထွက်လာတဲ့ ဆံပင်အတိုအထွာအောက်ဖျားလေးတွေ လိုက်ညှပ်ပါ 4.မိတ်ကပ် primer မရှိရင် အလှဆီနဲ့ moisture ခရင်ရောပြီး မျက်နှာကိုလူးပါ ပြီးမှ မိတ်ကပ်လူးပါ 5.ဆံပင်ညှပ်ကလစ် အမဲလေးတွေကို အေရာင်မိူင်းလာတာ သံချေးတက် လာတာမျိူးဖြစ်လာရင် လက်သည်းနီလေးကို ကလစ်မှာ […]